Xirsi Cali X. Xasan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waxa aynu og nahay qiimaha cilmiga iyo aqoonta, oo aan sharraxaad badan iiga baahnayn. Marka aynu doonayno in aynu tartanka dunida kaalin sare ka galno, waxaa muhiim ah in aynu u dhug yeelanno in bulshooyinka dunidu ay isku dhaafeen aqoonta iyo akhlaaqda. Sidaa darteed waxaynu baahi weyn u qabnaa waxbarasho tayo leh oo ay saldhig u tahay tacliinta madeniga ah, farsamada tiknoolajiyadda oo horumarsan, tarbiyad la dabbaqo, qiyam bulsheed la ilaaliyo kuwaas oo dhammaan halbeeggoodu yahay dhaqanka iyo diinta suubban ee Islaamku. Nolosha aadamaha waxaa aasaas u ah lammaanaha Ilaahay isu sameeyay. Unug bulsheedka qaran ka bilaabmaana waa qoyska. …
Dunida waxaa cammira, waxa dul saaranna ka faa’iidaysta oo ilaahay maamulkeeda ku karaameeyay waa aadamaha. Bini-aadamku wuxuu ka soo jeedaa lammaanahii Aadan iyo Xaawa. Bini-aadamku wuxuu wadaagaa ee ehel ahaan u xidhiidhiyaa saddex shay midkood: Qaraabo oo ah wixii xagga aabbaha ka yimaadda; Riximka oo ah wixii xagga hooyada ka yimaadda; iyo Xididtinnimo oo ah wixii guur ku yimaadda. Saddexdan shay ayaa dhaxalka hantiduna ka yimaaddaan oo marka qof geeriyoodo xoolaha mulkiya oo u hadha. Dhammaantoodna waxay ku xidhiidhsanyihiin xidhiidhka iyo isutagga lammaanaha. Guurkaygii ka hor muddadii dhallinyarada ee aan u diyaargaroobayey in aan u gudbo marxaladda xaasleyda, waxaan …
Marka qofka masuuliyadda loo dhiibo, nooc kasta oo ay tahay, waxay leedahay xuduud iyo qaab loo isticmaalo. Masuuliyaddu waxay tuujisaa oo soo saartaa waxa qofku yahay. Awoodda inta badan waxa weheliya xamaasad halis noqon karta, markay tahay awood weyn ama in uu qofku u taliyo xajmi ballaadhan. Waxaan odhan karaa waa lagu sakhraamaa. Waxaa caqliga tegsiiya dalabaadka badan ee dadka kaga imanaya, buunbuuninta kooxaha danaha ka leh, la-xisaabtan-la’aanta, aargoosiga, badnaanta anaaniyada iyo kibirka, isku dheellitir la’aanta awoodda uu u baahan yahay, waxa uu doonayo iyo helista awoodda xad-dhaafka ah iwm. Xaddiga sakhraddu badanaa waxay le’eg tahay hadba inta awood …
Musuqmaasuq waa ka faa’iidaysiga awoodaha iyo ku xoolaysiga sifo sharci darro ah. Xaqiiqo ahaanna, waa aafo weyn oo haysata waddamo badan oo dunida ah. Musuqmaasuqa ugu badani waa kan curyaamiya koboca dhaqaalaha iyo ka naafeeyey caddaaladda waddamada soo koraya, gaar ahaan dalalka u badan Yurubta Bari, Badhtamaha Aasiya, Laatiin Ameerika iyo Afrika. Musuqmaasuqu wuxuu dadyawga Soomaalida ku leeyahay sooyaal xun. Taas oo ay caddaynayso muddo hal qarni ah ka hor odhaahda laga sheegay Sayid Maxamed Cabdille Xasan: “Musumaasuq Soomaali waa meheraddeedii,” iyada oo aan wax dawlad ahi ka hanaqaadin geyiga Soomaalida, isla markaana aanay jirin shirkado iyo dhaqaale sidaa …
Caddaaladda waa aasaasaka maamulka wanaagsan iyo dawladnimada, waxaanay ka mid tahay qiyamka wanaagsan ee bini-aadamku doonisteeda ka siman yahay. Fulinteeduna waxay ka mid tahay mushkiladaha waaweyn ee haysta caalamka, gaar ahaan Afrika iyo guud ahaanba dunida saddexaad. Caddaaladdu waa shay looga baahan yahay dhammaan heerarka nolosha. Waxaa lagu tilmaamaa in ay ka mid tahay aasaasiyaadka nolosha. Xaqiijinta caddaaladda iyo hagaajinta garsoorku wakhtigii aan dawladda ka mid ahaa waxay ka mid ahayd waxyaalihii culayska nagu hayey, in kasta oo ay ka mid ahayd waxyaalihii madaxweynuhu ballan qaaday xilligii ololaha isla markaana himiladeedu nagu weynayd xukuumad ahaan. Kumaannu guulaysan in aannu …
Waa hubaal qof shaqaynayaa wuu khaldamayaa, Ilaahay ayuun baan khaldamin. Intii aannu shaqada dawladda ku jirnay khaladaad way naga dhaceen guud ahaan, anigana gaar ahaan way iiga dhaceen. Way dhacaysay wax aqoonxumo nooga dhaca, waanay dhacaysay wax aannaan ku talo gelin oo naga khaldamayay intuba. Balse ma jiraan khaladdo aan u badheedhay ama aan si kibir iyo dheeldheel ah ku galay oo aan hadda qoomamaynayo. Markii madaxweynuhu talada dalka la wareegay ee uu soo saaray tiradii koobnayd ee golaha wasiirrada, maadaamo oo filashadu aad u sarraysay waxaa taageerayaashii Kulmiye ee siyaasiyiinta ahaa ka soo baxay qarax siyaasadeed, oo dhammaan …
Intii aan xafiiska madaxtooyada joogay, waxyaabo badan ayaa i soo maray, gaar ahaantay, ama si guud noo soo wada maray. Dhacdooyinka aan ka xasuusto, ee xusitaanka mudan, ayaan qaybtan ku soo bandhigi doonaa. #1 Madaxtooyadu waxaa madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyna-ku-xigeenka Cabdiraxamaan Cabdillaahi Saylici. Waxaan marar badan dhibaato kala kulmi jiray iskuxidhka iyo u-kala-dabqaadka madaxweynaha iyo ku-xigeenka, ama waxa soo bixi jiray cabashooyin ka yimaadda madaxweyna-ku-xigeenka, taas ku saabsan wada shaqaynta aniga iyo isaga. Taas kuma aanan guulaysan sababahan soo socda dartood. Ugu horrayn Somaliland madaxweyna-ku-xigeenka waxa dastuurku awood u siiyey saddex qodob oo kala ah: Ku-simidda xilka madaxweynaha …
Marka aad mas’uuliyad dawladeed bulshada u hayso, had iyo jeeraale dad dan kaa leh ama ay hiwaayadooda tahay in ay madaxda daba yaacaan. Oo agtaada ka buuxo oo jaanis kaaga inta badan kaa qaadaya. Waxaa kale oo jira qaar adiga kula waaweyn oo aad ixtiraam u hayso oo iyagana aad wakhtigaaga wax ka siiso. Balse waxa laga yaabaa in ay inta badan dayacmaan dadkii aad u baahnayd in aad u shaqayso oo ah danyarta, naafada iyo inta nugul. Waxa kale oo iyana jira dadkii shaqadu u baahnayd oo meel ay kuu soo maraan waayay. Waad xanniban tahay oo waxaa …
Nolosha iyo safarka siyaasadda ayaa u qaybsama mucaarad iyo muxaafid. Maalin aad wax dhaleecaynayso iyo maalin adiga lagu dhaleecaynayo. Maalin aad wax faaqidayso iyo maalin adiga lagu faalaynayo. Maalin ay kuu toosan tahay iyo maalin ay kaa jiifto. Sidaa darteed, maalmihii nolosha iga soo maray ayay ka mid ahaayeen maalin aan mucaaradka dhex boodayay oo aan u arkayay dariiq wax lagu toosinayo oo adeegga bulshada iyo hoggaaminta dalka sida markaa jirtay si ka fiican loo beddeli karayey, si ay bulshadu u helaan qaab-nololeed tan ay ku sugan yihiin ka wanaagsan; maalin kalana waxaan hor boodayay oo ahaa muxaafid taageera …
Fikirka horumarinta waddooyinku wuxuu ku bilaabmay markii uu madaxweynuhu yimid talada. Waxay himiladu ahayd aynu waxqabad muujinno oo aynu la nimaadno wax ka beddelan wixii hore, ee markii hore Somaliland lagu soo waday muddo dheer. Waxay ahayd aragti horumarineed oo ku jirtay xukuumadda uu madaxweyne Silanyo hoggaaminayo. Waxaan u arkayay meelaha himiladaasi ka shaqeyn karto ay waddooyinku ka mid yihiin, waxaan u arkayay in adeegyada ay bulshaddu u baahan tahay ee muuqaalka horumarka soo saari kara ay waddooyinku kow ka yihiin. Waxa jiray barnaamijkii loogu talo galay in lagu fuliyo boqolkii cisho ee ugu horreeyay ee xukuumadda, 4 km …